China Caravan mover batrị LAXpower-1230 12V 30Ah LiFePO4 batrị batrị nwere chaja arụnyere na SOC Manufacturer and Supplier | LIAO
1. The ABS casing 12V 30Ah LiFePO4 batrị mkpọ maka adọkpụ mover.
2. Oke ike na ultra lightweight.
Model Nke LAXpower-1230
Elu ọnụ 30Ah
Max. na-aga n'ihu ugbu a 100A
Oge ugbu a 200A
Ọnụ ọgụgụ kasị elu ugbu a 300A
Max. odori ugbu a 2C
Nchaji ọkụ 14.6V
Nchaji ugbu a 4A
Ntinye aka AC 100-240V
Nchekwa okpomọkụ -10 Celsius C ~ 45 Celsius
Ibu ibu 5.6kg
Ndụ okirikiri (80% DOD) ＞2000 ugboro
IP klas IP21
Akụkụ 150mm * 275mm * 120mm
Ngwa Caravan na-agagharị, na-enye ike.
3. Ogologo oge kpụ ọkụ n'ọnụ na nchekwa kachasị.
4. Wuru na chaja na obere onwe-dischareg ọnụego.
5. Ogologo oge ọrụ ndụ nad pụtara ìhè arụmọrụ.
6. Special mere maka adọkpụ aga.
7. Ngwaahịa a na-ewu ewu na ahịa EU ruo ọtụtụ afọ.
Oke na Ngwa
Hangzhou LIAO bụ ọkachamara rụpụta nke prismatic LiFePO4Mkpụrụ ndụ Lithium. A na-ejikọ sel batrị site na iji sel ndị a. A ahọrọla fechaa maka LAXpower-1230 ebe etinyela mkpụrụ ndụ, chaja na batrị n'ime ngwaahịa 1.
Ebumnuche nke batrị a dị fechaa bụ ịnye ihe ngwọta dị mma maka onye ọrụ nke onye na-adọkpụ na-ebugharị ibu nke nwere 30 Ah na oke ibu. Batrị a nwere ike ịnapụta oke mmiri, ọ dị mfe ma yabụ dabara nke ọma na ebumnuche a.
Batrị ahụ karịrị ụgwọ zuru ezu iji mee otu ihe mmegharị nke adọkpụ ahụ. Enwere ike iji mover mee ihe ruo oge 50 n'oge iji ihe (35 A na-aga n'ihu). Na oke ojiji (100 A) enwere ike iji ihe ahụ mee ihe ruo ihe dịka 18 nkeji.
Ọ bụrụ na emeere ogologo oge batrị ga-agbanyụ na akpaghị aka ọ ga-achọ ịtọgharịa onwe ya. N'ihi na batrị sitere na Lithium LiFePO4onwu, ọ ga-ekwe omume ịmefu batrị kpamkpam n'adịghị ka batrị acid. Ozugbo batrị tọgbọ chakoo ọ ga-agbanyụ onwe ya wee ga-mkpa ka a recharged maka ọzọ ojiji. Nchaji na-ewere ọnọdụ site na eriri chaja na njikọ ntanetị.
Nke gara aga: SOC na aka gụnyere batrị 36V 40Ah LiFePO4 batrị maka skuuta eletriki / ọgba tum tum / ụgbọ ala.
Osote: Akwa ike magburu onwe ịrụzu arụmọrụ 12V 130Ah LiFePO4 batrị mkpọ maka moto n'ụlọ na adọkpụ
Wuru n'ime chaja Ìhè arọ nnukwu ike 12V 12Ah LiFePO4 batrị mkpọ maka caravan mover
Akwa ike magburu onwe ịrụzu arụmọrụ 12V 130Ah LiFePO4 batrị mkpọ maka moto n'ụlọ na adọkpụ